HomeAfaan OromooShira Jaaraa Digdamii Tokkoffaa (21st century conspiracy against the Oromo People)
Damee Boruu tin: Guraandhala 13, 2019
History repeats itself. In 1992, 20000 OLF fighters were encamped under peace negotiation between EPRDF and OLF. The EPRDF broke the agreement, killed, imprisoned and tortured the unarmed men and women in the camps. The same organization is encamping OLF army again, in 2019, for the second time. “Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.” Randall Terry
Shira jaaraa digdamii tokkoffaa (21st century conspiracy against the Oromo People) Sadarkkaa olaanaan humna farra Oromoo taheen qindaa’ee oofamaa jiru uummatni Oromoo itti dammaquu qabu. Qaree fi qeerroon Oromoo wagga arfan darbaan qabsoo hadhooftu Mootummaa EPRDF irratti godhaniin waarana baayyee sodaatamu uummata isaanii irraa harka qullaa darbuun namoota Oromoo akka durii cabsanii bituu yaadaniif yaaddoo guddaa tahee jira. Kanaafuu karaa danda’an maraan humna Oromoo cabsuuf waraaqaa jiru. Olola bifa hin qabne ABO fi WBO irratti galgalaa ganamaa afuufaa turan. Ammas itti jiru.
Waan ofii gochuu hin dandeenye ijaarsota akka OPDO keessa seenanii tokkummaa Oromoo diguuf yaaluun isa duraa tahee jira. Namoota Oromoo bitachuun akka Uummatni Oromoo ABO fi WBO jibbuu oloa kijibaa ofsiisuu darban akkaata itti humni kun cabu irratti sonaan hojjechaa jiru.
Namoota ABO fi WBO diiguu bobahan keessa Jawaar Mohammed nama hiriyyaa hin qabne. Akka nama tokkotti Jawaar siyaasaa barbaade hordofuun mirga isaa ti. Bara arfan darbana kana yaroo qarree fi qeerroon Oromoo Mootummaa EPRDF wajjiin qabsoo du’aa fi ajjeechaa keessa turan waan qeerroo wajjin jiru fakkaate OPDO wajjin nama hojjechaa ture. Maqaa midiyaan oduu iccitii argate hundaa OPDO dabrsuu dhaan gaga’ama himamuu hin dandeenye qabsoo uummata keenya iraan gahaa turera. OPDO wajjin akka hojjetaa turee fi itti jiru innuu afaan isaan himataa waan jiruu raga barbaacha deemuu nu hin barbaachisu. OPDO tahuu fi OPDOf hojjechuun isaa rakkina tokko hin qabu amma basaasa tahee ilmaan Oromoo irra gaaga’ama hin geessifne ti.
Waan baayyee akka gufachiisaa turee fi gaaga’ama akka qabsawwan Oromoo irraan gahaa ture ragaan jira. Horiin ijoollee bitee maqaa warra qeerroo bilisummaa Oromoo gageessan turan funanee OPDO dabrsaa ture. Biyya alaa fi biyyaa keessatti midiyaa gargaarsa ilmaan Oromoon dhunfateen ABO fi WBO irratti olola dhuma hin qabne ofaa ture. ABO hin jiru. WBO oduu kijibaati malee namni tokko bosona keessa hin qabu jedhee nama ololaa ture.
Utuu biyya hin galiin Keeniyaa deemee baqatoota Oromoo uniformii waraanaa itti uwiisee waraan J. Kamaal Galchuu jedhee utuu dhama’aa jiru ijoolleen itti damqatee ofiraa ariite jedhama. Maalii honkora kana fakkaatu hojjechuuf akka yaadu ifa jira. Hojii fi jaala WBOn uummata isaa biratti qabu xiqqeessuu fi gufachiisuu ture.
Gaafa galuu maqaa qabswwan Oromoo fi iccitti qabsoo Oromoo beeku hundaa komputera isaa wajjin Obbo Lammaa Magarsaa badhaase. Erga biyya seenee kaase biyyaa keessa deemee midiyaa isaa kalatti godhachuudhaan namoota OPDO irraa amantii qabne hunda funaansiise mana hidhaatti gursiisaa jira. Kan isaa xiqqaate namicha gad galoo Baqalaa Garbaa jedhamu dhugdatti marxifattee hojii basaasumaa fi humna Oromoo cabsuu irratti boba’ee jira. Lamaan isaanii yaroo darbe Wallaga keessa deemanii warra haasfisiisaa turan hundaa mana hidhaa galchisiisanii jiru.
Araarri maqaa Abbooti Gadaa fi Haadha siiqeen jalqabame kun shira guddaa of keessaa akka qabu kan agarsiisu Jawaar fi Baqalaan geggeessamuu isaa ti. Humni warra kana qindeessaa jiru humna OPDO qofaa miti. Warri Uummata Oromoo irraa soda qaban hunduu akka Shira kana keessaa harka qaban mamuu hin qabnu.
Hattoonni kun maqaa Abbootii Gadaan WBO hidhannaa hiikachiisanii ficcisiisuu maraatoon fiigaa jiru. Jawwar kijibiduu kana WBOn walaalee harka itti laata jedhee irraa hin eegu. WBOn kan eegachuu qabu namoota maqaa araaran itti dhufan eenyummaa isaanii, maal baatanii akka deeman, maal uufatanii akka jiran, eenyu akka isaan hordofaa jiru utuu hin beekiin walitti dhufuu hin qaban. “Buddeenni nama quubsu eelee irratti beekama” jedhan. Jawaar WBOf badhaasa qopheessaaf jiru WBOn bareechee akka beeku nan amana. Karaa biraa midiyaa waan qabuu milishaa Obbo Lammaa itti uniformii uwisee WBOn Kibaa, Dhihaa, Bahaa , Illuu fi Lixxa Shagar harka laatan jedhee soba isaan uummata keenya burjaajessu yaaluu hin dhiisu.
Dhuma Irratti WBOn kan jala muree fudhachuu fi hubachuu qabu waan deemaa jiru Abbootii Gadaa kan ilaalu waan tokko of keessa hin qabu. Waan deemaa jiru Shira Mootummaan EPRD fi humnootni Habashaa jibbinsaa uummata Oromoo qaban ofaa jiran akka tahe ifa jira. Abbootiin Gadaa dhugaa dhaabatnii fi dhugaa dubbatan haala kana keessatti akka rakkachaa jiran argaa jirra. Uummatni Oromoo xiqqaa fi guuddaan, dhiiraa fi dubartiin adda duraan qarree fi qeerroon Oromoo WBO wajjin dhaabbannee shira kana fashalsiisu qabna.
Ummata oromoo addaan qooduu ka danda’u barreeffama akkanaa ti malee hojii aktivistoonni akka Jawaar hojjetanan mini. Haga Jawaar qeerroo fi qarree daddamaqsee ofconaa hiriirse nama dhuunfaa miti jaarmiyaan tokko gochuu dandeenye. utuu Jawaar farra Oromoo ta’ee midiyaaleen akka ESAT maqaa Jawaar hinxureessan ture. Kanaaf waan barreessitan hunda fedhii fi dantaa ummta oromoof qabu wajjin madaaluun barreessaa!
Ummata oromoo hiruu ka danda’u barreeffama akkanaa ti malee hojii aktivistoonni akka Jawaar hojjetan miti. Hamma Jawaar hojjete jaarmiyaan tokko illee gochuu/hojjechuu hindandeenye. Utuu Jawaar farra dantaa ummata Oromoo ta’ee midiyaalee akka ESAT isa faarsu turan. Kanaaf, waan barreessitan fedhii fi dantaa ummta oromoof akka ta’utti madaaluun barreessaa!